Sunday May 31, 2020 - 11:27:16 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xiisad cusub oo dhanka diblumaasiyadda ah ayaa ka dhax aloosantay wadamada Suudaan iyo Itoobiya kadib markii ay maleeshiyaad Xabashi ah dad ku dileen gudaha Suudaan.
Xukuumadda Khurduum ayaa uyeeratay safiirkii ka fadhiyay magaalada Addis Ababa, war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamo Itoobiyaan ah ay kusoo xadgudbeen dhulka Suudaan ayna halkaas ka geysteen weerar dhimasho iyo dhaawac dhaliyay.
Sidoo kale xukuumadda Khurduum ayaa ku eedaysay Addis Ababa in ay iska dhega tirtay dhammaan heshiisyadii ku aadanaa in aan ladhamaystitin biya xireenka Wabiga Niil illaa ay kasoo gaba gaboobayaan wadahadallada sedax geesoodka ah.
Itoobiya ayaa sii waddo dhismaha biya xireenka ugu weyn qaaradda Afrika waxayna qarka usaarantahay in ay soo gaba gabayso iyadoo diiday baaqyo uga yimid Masar iyo Suudaan oo ahaa in aan waaskooyinka biya xireenka aan biya laga buuxin inta xal kama dambeys ah laga gaarin.
Wararka ayaa intaas ku daraya in xiisadda labadan dowladood ka dhax taagan ay cirka iskusii shareertay tan iyo markii maleeshiyaad Xabashi ah ay gudaha ugaleen gobolka Alghadaariif ee dhaca Bariga Suudaan.